Fitontongan’ny Vola Zeorziana Aseho Amin’ny Sary Novàna Tamin’ny Photoshop: Miala Avy Amin’ny 50 Cent Ary Tonga Amin’ny Hoe ‘Fanavotana Ny Miaramila Lari’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2014 8:32 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, čeština , Español, Français, English
Niteraka ahiahy momba ny fahasalaman'ny toekarena ao Zoerzia ny fitontongana tsy nisy toy izany nihatra tamin'ny sandan'ny vola “Lari” fampiasa manerana an'i Zoerzia, ary dia atahoran'ireo mpanjifa fatratra tokoa ny hisondrotan'ny vidin'entana ilainy andavanandro. Tamin'ny 5 Desambra, nisedra fihenan-danja 2.86% nanoloana ny Dôlara amerikana ny lari, nanjary ho lari roa vao mira dôlara iray – sandam-pifanakalozana ambany indrindra nanjo azy tao anatin'ny folo taona mahery.
Ny talem-paritry ny Banky Iraisampirenena ho an'ny Kaokazy Atsimo, Henry Kerali, dia nilaza fa azo atola amin'ny ampahany any amin'ny filàna betsaka ny dôlara amerikana arakaraky ny vanim-potoana ary koa ny zava-nitranga tany Okraina ilay fihenan-danjan'ny lari. Nihena ihany koa ny fanondranana entana avy ao Zeorizia nankany Okraina, na dia nitombo aza ny isan'ny mpizahatany.
Raha nanomboka nitambotsitra ny lari tamin'ny Zoma, nandefa sarin'ilay vola taratasy 1 lari, saingy nasiam-panovàna, ireo mpampiasa ny media sosialy, nosoloina tamin'ny endrik'i Nodar Khaduri, Minisitry ny Fitantanam-bola ny sarin'ilay Zeorziana mpanao hosodoko Niko Pirosmani. Novàna ihany koa ilay soratra ‘iray lari’ ho ‘choilari’ – fiteny manambany any an-toerana izay midika tsotsotra hoe ‘tsy misy hazondamosina’ na ‘famafàn-kiraro’.
Vantany vao nivoaka ny vaovao nilaza fa tafakatra ho 2 lari ny dôlara iray, nosoloina tamin'ny endrik'ilay Amerikana mpiangaly Rap, 50 cent, ny endrik'i Khaduri, nanehoana ny sanda vaovaon'ny vola Zeorziana.
Ao anatin'ny sarin'ny vola taratasy roanjato lari, novaina hanjary hisy ranomaso nitete ny sarin'ilay kômandà Zeorziana mpankahala Bolshevik, Kakutsa Cholokashvili, noho ilay fitontongan'ny sandam-bola.
Sary iray hafa ahitàna vola taratasy 10 lari, misy ny sary malazan'ny Renin'i Imereti avy amin'ilay hosodokon'i Davit Kakabadze, no mampiseho azy miala avy amin'ilay vola taratasy, arahan'ny soratra hoe: ‘Tsy manana reny intsony ny lari’, izay azo adika ihany koa hoe ‘ratsy be ny manjo ny lari’.
Nipoitra ny sary hafa izay manazava ny krizin'ny lari. Ity iray ity dia mifototra amin'ny afisy lehibe an'ny sarimihetsika iray avy ao Hollywood miaraka amin'ny lohateny hoe ‘ Novokarin'i Nodar Khaduri : Fanavotana Ny Miaramila Lari’.
Iray hafa maka tàhaka ny zava-misy avy amin'ilay Indray Andro Hono Tany Amerika no mampiseho ny fitrosonan'ny vola vy lari iray, miteny hoe ‘Mamelà ahy ry Nodar [Khaduri] …. Nibolisatra aho’.
Mifanindran-dàlana amin'izay ihany, ny vola “dram” tatsy amin'i Armenia mpifanolo-bodirindrina dia nitontongana ihany koa nanoloana ny dôlara, taratry ny fihenàn-danjan'ny vola “robla” Rosiana. Ao Zeorzia, niantso fitoniana ny banky foibe, nanome toky an'ireo olom-pirenena velon-tebiteby fa ampy hery sy mafy fototra hivoahana velona amin'io onja io ny toekaren'ny firenena ary tsy hisy fisondrotam-bidy. Andrasana ny hisian'ny fahamarinan-toeran'ny lari amin'ny herinandro aorian'izao, raha heverina ho eo amin'ny 3,5 % eo ny sondrom-bidim-piainana isan-taona.